Par Taratra sur 10/06/2017
Manana tranoheva mandritra ny hetsika ho an’ny fizahantany ITM eny Andohatapenaka (8-11 jona) koa ny Cnaps. Azo fantarina eny an-toerana ny kaontin’ny mpikambana tsirairay, mandray mpikambana vaovao ho an’ny mpampiasa, torohevitra samihafa manodidina ny fiahiana sosialy sy ny fanampiana omen’ny Cnaps.
Mirefy 34 tapitrisa ha ny tany mbola azo jariana eto Madagasikara. Voalaza fa ny 10%-n’io ihany anefa no mbola voavoly. Maro anefa ireo tantsaha mitaraina fa tery ny tany ampiasain’izy ireo, ary sarotra ny fangatahana tany amin’ny fanjakana.
Manodidina ny 400.000 isan-taona ny tanora manomboka miasa eto amintsika. Zara anefa raha misy tanora nahazo fiofanana ara-pambolena 6000 hatramin’ny 8.000 isan-taona. Tsy misy ny politika mazava avy amin’ny fanjakana hamahana io olana io, ary toy izany foana ho an’ireo mpitondra mifandimby.
Nitarin’Ambatovy ho rafi-pitantanana ny tontolo iainana (AEMS) ny rafi-pitantanana ny zavamananaina. Nampidirina tao anatiny ireo singa hafa, toy ny rano, ny tany, ny rivotra. Tafiditra amin’ny paikady hanarenana ny tontolo iainana sy hiarovana ireo zavamananaina ao anatin’ny faritra trandrahiny izao.